Indlela yokugcina iiProjekthi ngexesha - ITS Tech School
Kwangexesha elide, inzululwazi ibonise ukuba sinokwenza into enye nayiphi na umzuzu. Konke ngakumbi, sinokuya kwisenzo esisodwa seengqondo kwaye senze isenzo esisodwa sengqondo nganoma nayiphi na umzuzu: sinokuthetha okanye ukufunda kodwa okwenziwe okwenziweyo okwangoku. Singaba nomcinge omnye kunoma yimuphi umzuzu, kwaye ngaphezu koko sizitshintsha ukuba sitshintshe ngokuqala ngento enye ukuya kwilandelayo, xa sithengisa ngakumbi amandla ethu okuqonda.
Ku-2001, uJoshua Rubinstein, uF.D., uJeffrey Evans, uF.D., noDavid Meyer, i-Ph.D., baholele kwaye bahambisa iimviwo ezine apho abadala abakhulileyo batshintshana phakathi kweendlela ezahlukeneyo, umzekelo, ukunyamekela Imiba yeemathematika okanye ukuqoqa amaqhosha ejometri. Ukufunyanwa kwazo zonke iinkqubo ezingafunyanwanga:
Amalungu alahlekelwa lixesha xa befuna ukutshintsha ukuqala ngenye indlela kwaye emva kokulandelayo.
Njengoko izabelo zenziwe zibe nzima, amalungu awenzayo alahlekelwa ixesha elongezelelweyo.
Ngako oko, abantu ngabanye bathatha ixesha elide ukuba batshintshe phakathi kweendlela ezihamba phambili.
Iindleko zexesha zazigqwesileyo xa amalungu atshintshe kwizenzo ezazisandula ngokutsha.
Kubalulekile ukuba sizide kude nomsebenzi ngamanye amaxesha; Enyanisweni, ndiyalela iimeko zam zokubethelwa kweminye imizuzu ye-25 ukwenza, ilandelwe yiminqamu emizuzu emihlanu, ilandelwa ngenye imizuzu ye-25 (uphinde uphinde ulungele ukugqitywa). Ukuqhawulwa yinto ethile, nangona kunjalo ukungafani. Ukuphuka kukufutshane, ukubandakanya kwaye ucinge. Iziphazamisi zisifumana ukulala kwaye ziphazamise isabelo sethu ngokupheleleyo.
I-Meyer ithe ukuba neengcipheko zengqondo ezicwangcisiweyo ezenziwe ngokuhamba phakathi kweempahla zingabiza ixabiso le-40 yepesenti yengxaki yomntu. Kubonakala kungenakwenzeka ukuba siya kuba namandla okuphinda sikhombise inkcubeko ukuba sivume ukugqwesa kokubhuka nokugqiba enye imbi phambi kokuqala enye.
Ngethuba elihle lokuba le ndlela yokuziphatha ayinakuphepheka kwaye ingenangqiqo, yintoni esinokuyenza ukuze sigcine imisebenzi yethu ngexesha? Mhlawumbi impendulo efanelekileyo yindlela yokuzimela yodwa esebenzisa ubutyebi bokufikelela kunye nokuzuza.
UkuFumaneka kweeNdawo zoLwazi kunye noPhuhliso lweMveliso
Ukuphonononga ixesha kwimisebenzi ngokuqhelekileyo kwenziwa ngokusebenzisa i-gauge point gauge yeyona nto kunye neyona nto ifanelekileyo. Iimeko eziphambili zeimeko, ukuvavanya kwimiba yodwa kuyasinika ipesenti ze-50 inokufezekiswa. Siyakwazi ukwakha loo mathuba amaxabiso ambalwa ngokumelela kokufikeleleka kwe-asethi kunye nokusebenza kwabo okuqhelekileyo, esiye sifunde ngokusebenzisa ukuhlolwa phakathi kwe-72 ukuya kwi-74 ipesenti. Ndiza kusebenzisa i-70 yepesenti yokungazinzi.
Kwi-Equation 1 ethatha emva, d ithetha ngekota, e ithetha nomlinganiselo wokuzama ukuzalisa ukuphunyezwa, u kuthetha nokufikeleleka kwe-asethi kunye n ithetha inzuzo eqhelekileyo yokusebenza komsebenzi wolwazi lomgca. Isimo 2 fathoms for d.
Ukulingana kwe1. Ukulinganiswa kweSahluko soBodwa Ukusebenzisa ukuFumaneka kunye neMveliso
Ukulingana kwe2. Ukulinganiswa kweSahluko esiBodwa Ukusebenzisa ukuFumaneka kunye neMveliso yoMzekelo
Isimo 2. Ukulinganiswa kweSahluko esiBodwa Ukusebenzisa ukuFumaneka kunye neMveliso yoMzekelo
Iimpawu zale nkqubo
Le nqubo iluncedo xa iiyure zihanjiswe zihamba ngokuqinisekileyo kwaye umsebenzi uqhelekileyo kwaye ulula ukuqinisekisa.
Thina sonke siyazi ukuba kunzima kangakanani ukuba ininzi ibonise, kunye naluphi na ukuvumelana, ukuchaneka kwezifundo zabo. Ukuxhamla, okanye ukutshintshana, kuyindawo yasendle esheshayo. Ekubeni esi simo sengqondo sisebenza nzima asikwazi ukutshintsha, sifanele sisebenzise izibalo ezinobunzima.
Kukho iindlela ezininzi zokulinganisa ixesha kwaye ezinye zichanekile kunabanye. Bonke bahamba nobuthathaka. Sivame ukuzakhela uphuhliso lwethu lwentlupheko ngokubhekiselele kumfanekiso ongcono, okwenza kube nzima ukulungelelanisa ukungenakulungelelaniswa kwezi zi-appraisals. Iimeko ezifanelekileyo kakhulu, inqaku elizimeleyo liza kusinika i-50 ipesenti yokuphumelela. Siyakwandisa loo mathuba ngokuthatha i-gander phantsi kweemeko ezilungileyo kakhulu kunye neyona ndlela ephawulekayo kakhulu, ngaphezu kokufikelela kwe-asethi kunye nokusebenza kakuhle.